Maro ny mpamaky hifandray amiko amin’ny Facebook mangataka toro-hevitra amin’ny fiainany ny fitiavany sy ny ankizivavy izy ireo no nihaona an-tserasera. Izy ireo ihany koa ny mangataka ny toro-hevitra mikasika ny fiarahana amin’ny Filipiana ary ny fomba ny fitondran-tenany. Maro amin’izy ireo dia manomana ho any Filipina mba handeha manodidina ka hitsena ny vehivavy izay afaka mety manana fifandraisana lalina miaraka. Noho izany, nihevitra aho fizarana ity lahatsoratra ity dia hanampy ihany koa ireo lehilahy hafa izay mety hahazo ny Filipiana olon-tiany na ny vadiny. Isika dia hijery ny fanontaniana toy ny hoe: Mifantoka amin’ny zavatra izay tianao. Raha toa ianao ka handeha ho any Filipina amin’ny tsy mieritreritra ny hahazo lehibe, dia ny toerana toy ny Angeles, Subic Bay, ao Manila na Cebu afaka cater ny zavatra ilaina. Ny fisotroana zazavavy eo amin’ny asa no voly sy hitondra anao ny tsara. Ho azy izany rehetra momba ny raharaham-barotra. Raha mitady zavatra hafa lehibe noho ny tsy mijery ny handeha any amin’ny fisotroana fa ny fisotroana tovovavy amin’ny adidy. Mahita zazavavy online alohan’ny handeha sy hitondra azy toy ny ianao te-ho raisina araka ny mpiara-miasa ny nofy. Raha tsy maintsy mandoa ilay zazavavy miaraka aminareo, dia tsy misy fifandraisana, ny raharaham-barotra. Aza afangaro ny fitiavana ho an’ny raharaham-barotra na raharaha noho ny fitiavana. Ahoana no tokony hitondra tena nandritra ny daty? Fotsiny ny tenanao, fa tsy ho tsy mahalala fomba. Ny iray amin’ireo tena manafintohina ny zavatra azonao atao dia ny mijery vehivavy hafa raha toa ianao ka amin’ny daty. Raha toa ka manantena fa manana mahatahotra fifandraisana, na dia vao mahazo nametraka ny mety ho nihena raha toa ianao ka tsy tapaka avy nanamarina ny vehivavy iray hafa ny fananana. Manana ny fitsipi-pifehezana. Mety ho tsara ho azy mba manadala ankizilahy miaraka amin’ny bandy hafa, na jereo ny olona hafa ny»entana»rehefa avy fotsiny ny karama ho an’ny sakafo, ary ny diany ho roa ao Boracay.
Mandeha haingana loatra. Filipinas tsy mandeha haingana be, ka raha hiala ny ao ambadiky satria ianao no ampiasaina mba mandeha fifadian-kanina, dia mety mahatsiaro ho ratsy. Filipinas ny ankamaroany mpanoa. Raha hanontany ny toerana dia te-hihinana, ny ankamaroan’izy ireo dia manao hoe:»miankina ianao». Miezaka ny ho mahalala fomba. Maro Filipinas tena, tena hanaiky noho ny fanabeazana. Ianareo tsy tokony handray izany amin’ny fomba ratsy na miezaka ny fanararaotana an-toerana. Ohatra, tsy ho eo mitondra ny daty. Hisokatra ampy avelao izy hisafidy ka fantany fa ny fihetseham-po, ny zavatra tiany sy maniry MANISA. Izany dia hahazoana teboka LEHIBE. Raha afaka manome hery azy, ianao no manome azy ny fihetseham-po tsy misy olon-kafa azo atao, ary izy dia hidera anao, satria izany (raha toa izy dia ny vehivavy tsara). Hafa zavatra azonao atao mba hahazoana hevitra dia ho liana amin’ny ny kolontsaina. Miezaka ny sakafo ny firenena, miezaka mianatra ny teny. Raha toa ianao ka nanolotra ny vahiny sakafo fa tsy mihevitra afaka mihinana ianao, tsy tamim-panajana. Raha toa ka tsy tahaka ny Filipiana sakafo, milaza fa te-hihinana zavatra Amerikana na Eoropeanina sakafo. Ny maha-rangahy no lehibe plus. Filipiana ankizivavy dia voasarika ho tompokovavy. Izay hanokatra ny varavarana ho azy, hanontany azy sy hahatonga ny manapa-kevitra izay mba handeha? Tsarovy, fanomezana hery miasa. Ary rehefa ianao dia asehoy izany, dia ho hita ho toy ny tena, loka, tsy fahita firy sarobidy gem fa ny vehivavy hafa dia ara-bakiteny miezaka mba hangalatra. Taorian’ny daty vitsivitsy. raha mahatsapa tena ho toy ny hafa, mangataka ny mba ho lasa ny olon-tiany. Tsy hamela izany mihantona eo ho»namana amin’ny soa»satria izany dia midika ho tsy liana na inona na inona fa ny firaisana ara-nofo. Ary izy dia manapa-kevitra ny hivoaka avy hatrany.
Raha toa ianao ka niaraka ny mpandala ny nentin-drazana tsy tena malala-tsaina Filipina, tsy ho tena opinionated momba ny fomba miely patrana ny fivarotan-tena dia ao Filipina, satria na dia misy, izany dia mora mahatsapa ny lohahevitra maro. Izany dia mitovy amin ny miresaka momba ny andriamanitra, politika na foko any ny United States na miteny ratsy momba ny fianakavian’ny mpanjaka ao ANGLETERA na Thailand. Izany dia niteraka adi-hevitra ao Filipina. Raha tsy nanana firaisana ara-nofo amin’ny mpivaro-tena aloha, dia tsy tsara kokoa ny milaza izany noho izay mety hanova ny ao an-tsainy ny momba ny fitandremana ny anao. Tsy hanolo-tena raha tsy mahatsapa toy izy ny iray. Misy hatrany ny fizahan-toetra sy ny fahadisoana eo amin’ny fiarahana. Mety hihaona adala ireo, ahiana ho mpisoloky na ny sasany izay ianao vao tsy mifanaraka amin’ny. Izany fotsiny dia midika hoe tsy maintsy miverina avy hatrany. Mety hihaona volamena mpihady izay, dia foana ny am-paosiny. Nentim-Paharazana Filipinas. Misy ny sasany tena nentim-paharazana Filipinas izay avy amin’ny faritany. Raha mahafeno io karazana Filipiana zazavavy, dia tsy afaka ny hanana firaisana ara-nofo raha tsy manambady azy. Raha toa ianao ka tena lehibe, ary mihevitra izy dia ny anankiray, dia hanambady azy dia ny hany safidy ny handray zavatra bebe kokoa.
Raha toa ianao ka tsy Kristiana, na ny tsy manana fivavahana. Fotsiny ho mahalala fomba. Tsy miresaka misy dikany izany momba ny fivavahana, satria maro ny Filipinas tena ara-pivavahana. Araka wiki fikarohana, ny mponina rehetra ao Filipina no finoana Kristianina(indrindra fa ny fiangonana Katolika Romana). Miresaka na Ratsy manodidina ny bandy namana. Ho an’ny ankamaroan’ny Filipinas izay nentin-drazana, miresaka momba ny firaisana ara-nofo ireo zavatra manodidina ny namana no manafintohina
← Ny fomba hitsena ny Filipina 'eo an-toerana' - ny Fiainana ao Filipina - tserasera
Aho fa tsy menatra ny antsika manokana. Filipiana ankizivavy →